आयो जिपको ग्लाडिएटर, ३० इन्च पानीमा सहजै चलाउन सकिने
लस एन्जेलस अटो शोमा जिपले ग्लाडिएटर नामक सवारी साधन सार्वजनिक गरेर सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । जिप ग्लाडिएटर एक पिकअप ट्रक हो । यसमा ५ जना ब्यक्ति बस्न सक्छन् भने पछिल्लो भागमा छुट्टै ५ फुट स्पेस दिइएको छ । यसमा जरुरी सामान राखेर यात्रा गर्न सकिन्...
डर्ट बाइक पारखीलाई खुशीको खबर, यामाहाले ल्यायो नयाँ बाइक
काठमाडौं – यामाहाको अफरोड बाइक एक्सटीजेड १२५ नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ । यामाहाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक एमएडब्ल्यु इन्टरप्राइजेजले देशभर सो बाइकको बुकिङ प्रारम्भ भएको बताएको छ । यामाहा एक्सटीजेड १२५ को मूल्य ३ लाख ९९ हजार ९ सय रुप...
विश्वको सबैभन्दा ठूलो र लगभग १११ वर्ष पुरानो लस एन्जलस मोटर शोमा होन्डाले आफ्नो नयाँ ५ सिटर एसयूभी ‘पासपोर्ट’ प्रदर्शन गरेको छ । नयाँ पासपोर्टमा सिंगल इन्जिन गियरबक्सको प्रयोग गरिएको छ । यसमा ३.५ लिटरको भी६ पेट्रोल इन्जिने छ जसले २८४ हर्...
बजाजले ल्यायो पल्सर १५० नियोन
बजाजले भारतमा नयाँ पल्सर १५० नियोन बाइक लन्च गरेको छ । यसको मूल्य एक्स सोरुम दिल्लीमा ६४ हजार ९९८ भारु तोकिएको छ । बजारमा हाल प्रचलित पल्सर १५० क्लासिकलाई नयाँ कलर अप्सनमा उपलब्ध गराएर यसको नाम नियोन राखिएको हो । सो बाइक नियोन रेड, नियोन एल्लो र नियो...
पल्सर १५० ट्विन डिस्क पनि नयाँ कलरमा
बजाजको पल्सर सिरिजका बाइक निकै नै लोकप्रिय छन् । यही सिरिजको पल्सर १५० ट्विन डिस्क नयाँ कलर भेरिएन्टमा बजारमा आउने भएको छ । भारतीय बाइक सोरुमहरुमा यस्ता केही भेरिएन्ट पुगिसकेका छन् । सो नयाँ बाइकको मूल्य पनि पहिलेको पल्सर १५० ट्विन डिस्क भन्दा क...
एक महिनामै ३८ हजार ५०० हुन्डाई स्यान्ट्रो बुकिङ
केही दिन पहिले लन्च भएको नयाँ हुन्डाई स्यान्ट्रो यो वर्ष सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कारहरु मध्ये एक भएको छ । कम्पनीका अनुसार हुन्डाई स्यान्ट्रो अहिले सम्ममा ३८ हजार ५ सय युनिट बुकिङ भइसकेको छ । ४ महिना सम्मको प्रतिक्षाहुन्डाई स्यान्ट्रोको भारी मागको क...
दमदार पर्फमेन्स र सानदार लुक्सका साथ केटीएमले ल्यायो १२५ सीसी सेगमेन्टको पहिलो बाइक
केटीएमले भारतीय बजारका लागि १२५ ड्युक लन्च गरेको छ । सो बाइक भारतमा १२५ सीसीको सेगमेन्टमा पहिलो बाइक हो । सो बाइकको मूल्य दिल्ली एक्स सोरुममा १ लाख १८ हजार भारु तोकिएको छ । सो बाइकको प्रि–बुकिङ १ महिना अगाडि देखि नै शुरु भएको थियो । केटीएम १२...
नेपाल आउने भयो सुजुकी बर्गम्यान स्ट्रिट, मंसिर अन्तिम सातामा लन्च हुने
काठमाडौं – गत साउन महिनामा भारतीय बजारमा लन्च भएको सुजुकीको हालसम्मकै सर्बाधिक स्टाइलिस स्कुटर बर्गम्यान स्ट्रिट १२५ नेपाली बजारमा समेत उपलब्ध हुने भएको छ । मंसिर महिनाको अन्तिम सातामा सो स्कुटर लन्च हुने सुजुकी बाइकको नेपालका लागि आधिकारिक वि...
५७ लाख ९० हजार सम्मका एमभी अगस्टा बाइक नेपालमा
काठमाडौं – विश्वमै महंगो ब्रान्डको रुपमा परिचित एमभी अगस्टाका बाइक नेपालमा पनि उपलब्ध छन् । नेपाली बजारमा ५७ लाख ९० हजार सम्मका एमभी अगस्टाका बाइक उपलब्ध छन् । हालै नेपाली बजारका लागि आधिकारिक वितरक बनेको भेलोसिटी प्रालिले लाजिम्पाटमा सोरुम...
यो हो लक्जरी कार भन्दा पनि महँगो सुपरबाइक, भारतमा ५ युनिट मात्र बेचिने
सुपर बाइकको लागि प्रख्यात कम्पनी डुकाटीले २०१९ मोडल प्यानिगेल भीफोर आर (Panigale V4 R) भारतमा लन्च गरेको छ । सो सुपरबाइकको मुल्य लक्जरी कार भन्दा पनि महँगो रहेको छ । यसको मुल्य ५१ लाख ८७ हजार (एक्स सोरुम) भारु रहेको छ । यो सुपरबाइकमा जडा...
लन्च भयो महिन्द्रा अल्टुरस जी४, मूल्य २६ लाख ९५ हजार भारु
महिन्द्राले आफ्नो नयाँ एसयूभी अल्टुरस जीफोर भारतीय बजारका लागि लन्च गरेको छ । यसको मूल्य २६ लाख ९५ हजार भारु राखिएको छ । कम्पनीले बजारमा उपलब्ध गराएको सो पहिलो फुलसाइज एसयूभी साङयोङ रेक्सटन एसयूभीमा आधारित छ, जो हाल प्रचलित महिन्द्रा एक्सयूभी ५०० भन...
केटीएमले पनि ल्यायो एबीएससहितको २०० ड्युक, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
एबीएस सहितको बाइक ल्याउने लहरमा केटीएम पनि मिसिएको छ । भारतमा न्यु २०१८ केटीएम २०० ड्युक एबीएस लन्च भएको छ । सो बाइकको मूल्य १ लाख ६० हजार भारु राखिएको छ, जुन हाल प्रचलित स्ट्यान्डर्ड मोडल भन्दा ९००० भारुले महंगो छ । बाइक अरेन्ज, ह्वाइट र ब्ल्याक...
ल्यान्डरोभरको द न्यु रेन्जरोभर इभोक अन्ततः सार्वजनिक गरिएको छ । यो पहिलको रेन्जरोभर भन्दा अझै राम्रो र स्टाइलिस छ । यसको स्पेस पनि पहिले भन्दा अझै बढी छ । सेकेन्ड जेनेरेसनको सो ब्रिटिश कारमा प्रिमियम इन्टेरियरका साथै फेब्रिकमा समेत मल्टिपल अप्सन छ ।...
एमजीले ल्यायो इलेक्ट्रिक कार ईजेएस, नेपालमा अर्को वर्ष आउने
एमजी मोटरले अन्तर्राष्ट्रिय बाजारमा आफ्नो नयाँ मोडेल ईजेएस (इलेक्ट्रिक जेडएस) को लन्च गरेको छ । यससँगै यो इलेक्ट्रिक कार लन्च गर्ने पहिलो ब्रिटिश ब्रान्ड बनेको छ । सो इलेक्ट्रिक गाडीमा तेज चार्जिङको सुविधा पनि रहेको छ । एमजी एक प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रा...
आउदै छ एबीएस सहितको पल्सर २२० एफ, के हो एबीएस ?
अब बजाज पल्सर २२० एफमा पनि एबीएस हुने भएको छ । एबीएस सहितको पल्सर २२० एफ परीक्षण गरिरहेको तस्बिर अनलाइनमार्फत लिक भएको छ । हाल भारतीय बाइक निर्माता कम्पनीहरुले सबै बाइकमा एबीएस राख्न थालेका छन् । भारतमा लागू हुने नयाँ सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड अनुसार २०१९...
भारतमा लन्च भयो एबीएस सहितको टीभीएस अपाचे आरटीआर १८०
टीभीएस मोटर कम्पनीले भारतमा ड्युअल च्यानल एबीएसको साथमा आफ्नो पहिलो टीभीएस अपाचे आरटीआर १८० बाइक २०१९ मोडलको रुपमा लन्च गरेको छ । २०१९ टीभीएस अपाचे आरटीआर १८० को स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्टको मुल्य ८४ हजार ५ सय ७८ भारु राखिएको छ । अपाचे आरटीआर १८० एबीएसको...
भारतमा आयो मारुती सुजुकीको नयाँ अर्टिगा, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
मारुती सुजुकीले आज भारतमा आफ्नो नयाँ कार अर्टिगा लन्च गरेको छ । सो कारको शुरुवाती मुल्य ७ लाख ४४ हजार भारु रहेको छ । यसको टप भेरिएन्टको मुल्य १० लाख ९० हजार भारु रहेको छ । कम्पनीले सो कार १० भेरिएन्टमा उपलब्ध गराएको छ । पेट्रोल भेरिएन्टको मूल्य ७ ल...
आयो नयाँ डिजाइनको बजाज पल्सर १५० क्लासिक, यस्तो छ डिजाइन
बजाज पल्सर भारतीय बजारमा निकै लोकप्रिय बाइक हो । यसैलाई ध्यानमा राखेर कम्पनीले बजाज पल्सर १५० क्लासिकलाई नयाँ डिजाइनको साथमा बजारमा ल्याएको छ । अहिले सम्म पुरै कालो रङमा मात्र उपलब्ध भएको पल्सर १५० क्लासिक अब दुई रङमा उपलब्ध हुने छ । अब रातो रङ हाइल...
नाडाले सवारी साधनको एमआरपी मूल्य सार्वजनिक ग¥यो, कुन गाडीको मुल्य कति ?
काठमाडौं - नेपाल अटोमोवाइल डिलर संघ(नाडा)ले सवारी साधनको एमआरपी मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सीसी अनुसार अन्तशुल्क निर्धारण गरेपछि संघले अधिकतम मूल्यसूची(एमआरपी) सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा मारुती सुजुकीको अधिकृत...
आयो विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिको बाइक, यस्ता छन् विशेषता
इटालियन मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी एमभी अगस्टाले विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिको बाइक प्रदर्शन गरेर सबैलाई चकित पारेको छ । कम्पनीले सो बाइक हावाको गति भन्दा पनि अढाई गुणा तीव्र रहेको जानकारी दिएको छ । एमभी अगस्टा ब्रुटाले १००० सेरी ओरो नामक उक्त बाइक ३०...
टाटाले नेपालमा ल्यायो नेक्सन क्राज, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
काठमाडौं – टाटा मोर्टसको नेपाल स्थित आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले नेपाली बजारका लागि नयाँ गाडी नेक्सन क्राजको बिक्री वितरण आरम्भ गरेको छ । मल्टिड्राइभ मोडको विशेषता युक्त यस नयाँ गाडी शहरको व्यस्त सडक देखि लिएर राजमार्गमा समेत अत...
आयो सुजुकी जिक्सर एसपी एबीएस
काठमाडौं – नेपालको लागि सुजुकी दुई पांग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरक भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिले नयाँ बाइक जिक्सर एसपी एबीएसलाई नेपाली बजारमा ल्याएको छ । पुरानो जिक्सरको तुलनामा यसको लुक्समा कुनै परिवर्तन नगरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ज...
२०१९ टोयोटा कोरोल्ला सार्वजनिक : विश्वको सर्बाधिक बिक्री हुने सेडान
टोयोटाको प्रसिद्ध कार टोयोटा कोरोल्ला औपचारिक रुपमा ग्वांगझाउ अटो शोमा सार्वजनिक भएको छ । पहिले भन्दा यसको डिजाइनमा निकै नै परिवर्तन गरिएको छ भने अझ स्पोर्टी समेत छ । यसलाई भारतमा सायद कोरोल्ला अल्टिस भनिने बताइएको छ । यसमा भएको स्लिकर हेडल्याम्प र...
अब महिन्द्राको इलेक्ट्रिक अटो रिक्सा
महिन्द्रा इलेक्ट्रिकले भारतमा ट्रिओ नामक इलेक्ट्रिक थ्री ह्विलर्सको रेन्ज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘ट्रिओ यारी’ ई–रिक्सा र ‘ट्रिओ’ थ्री ह्विलर अर्थात अटो ल्याएको हो । ट्रिओ यारीको मूल्य १ लाख ३६ हजार र ट्रिओ अटोको म...